Education Electromechanics TSO Antwerp - Gaa! AKWỤKWỌ AKWỤKWỌ
ụdịdị dị iche iche School > Ihe ọmụmụ anyị > STEM> Engineering & Technology > Electromechanics
De oge mbu TSO Electromechanics N'ezie bụ ntụziaka na-adabereghị na ya, bụ nke a na-atụle nke ọma na mgbakọ na mwepụ, igweike na ọkụ eletrik. N'ụlọ ụlọ anyị, robotics, automation na kọmputa na-achịkwa nkà na ụzụ bụ etiti. E nwere nnukwu oru ngo arụ ọrụ. Nke a na ya na ụlọ akwụkwọ na mmụta ebe obibi.
Na 2 degree degree Electromechanics a na-enye usoro zuru ezu dịka nkwadebe maka mmụkwu ma ọ bụ nhọrọ ndị ọzọ pụrụ iche na ogo ogo atọ. Ị mara ihe dị iche iche, ngwaọrụ na usoro. Ị mụtara ịmepụta ụlọ na nrụnye, kwadebe usoro na ilekọta ha na ngwanrọ ọkachamara. Site na ime ka ị mụta ikpe ikpe mbụ banyere uru ya.
Na 3 degree degree Electromechanics Dị ka electromechanical, ị na-amụta nyochaa, na-arụzi ma dezie nrụpụta ụlọ ọrụ na mmepụta usoro. Ị chọpụta ụwa nke engines na generators, automation, PLC controls, ... Ị na-amụta otú e si achịkwa igwe ma jiri ya mee ihe n'ụzọ kọmputa (CNC, CAD-CAM).
N'oge gị ụwa ị nweta ohere zuru oke nke ihe ị maara ma nwee ike itinye n'ọrụ. Anyị nwere ezigbo ihe imekọ ihe ọnụ na ụlọ ọrụ karịa Atlas Copco & Umicore iji kpochapu ma wepuo onwe ya n'elu ulo oru onwe ya.
Ị nwere ike ugbua na Ngozi 1e malite na otu nkwalite mbụ STEM. Chọpụta ihe ọzọ site na 1e degree STEM.
Ị nwere onwe gị
Ịchọ sayensị na nkà na ụzụ na-amasị gị? Ị na-arụ ọrụ n'ụzọ ziri ezi na nke onwe ya ma ị nwere anya maka nkọwa?
Enweghị ọzụzụ a kapịrị ọnụ tupu achọrọ ya, ma usoro mgbakọ na mgbakọ na ụzụ kwesịrị ịbụ ike zuru oke. Anyị na-atụ anya na ị ga-anụ ọkụ n'obi ịmụta ma mezue ọrụ zuru ezu. Nghọta nka dị mkpa.
Nhazi kachasị mma bụ 1e degree STEM
"Mgbe m gụsịrị ọmụmụ ihe! Ọmụmụ ihe gbasara ahụike m nwetara ọkachamara bachelor ọkachamara. Ruo oge ụfọdụ, arụrụ m ọrụ dịka onye injinia robot. Ugbu a, m na-arụ ọrụ dịka onye injinia ọrụ nchịkwa. Ana m etinye usoro PLCs ma mezue nrụnye. Ihe ndị m na-eme na-aga n'ihu! Ụlọ akwụkwọ ntụrụndụ m mụtara n'ụbọchị ọ bụla n'ọrụ m. "
Mgbe nhazi 3e Electromechanics ị nweta ya diplọma nke mmụta sekọndrị. Omume a na-enye gị ntọala siri ike ịmalite ọmụmụ ihe dị elu n'ime ọzụzụ. Ị nwere ike ịrụ ọrụ dị ka onye injinịa, onye nhazi, onye na-arụzi ọrụ, ma ọ bụ onye ọrụ, ma e nwere ọtụtụ ihe ndị ọzọ. Ị ga-achọta ozi ndị ọzọ gbasara ọmụmụ ihe ọzọ mgbe ị gụsịrị akwụkwọ a ebe a.
Otú ọ dị, site na diploma a, ị nwere ohere dị ukwuu maka ịrụ ọrụ na ụkọ ọrụ dịka ndozi ụlọ ọrụ eletriki ma ọ bụ ụlọ ọrụ mmezi.
Lelee ebe a na-amụ ihe nke nkuzi TSO Electromechanics: